Fito mianadahy voasambotra: efa noravaina saika hamidy no sarona ilay Sprinter halatra | NewsMada
Teny Ambohimangakely no nangalarina. Tany Ambohidratrimo no hita ny fiara Sprinter iray efa voarava ary efa teo an-dalam-pivarotana azy. Olona fito mianadahy no voasambotry ny zandary, ka anisan’izany ny ati-doha izay voasambotra tany Ankazobe.
Ravan’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ambohimangakely ireo tambajotrana mpangalatra fiara Sprinter. Ny 3 aogositra 2019, nahazo loharam-baovao ny zandary avy ao amin’ny zana-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Soamanandrariny fa nisy fiara Sprinter iray nipetraka tao anaty garazy eny Ikianja Ambohimangakely, nisy nangalatra. Araka ny fanazavan’ny CB-n’ny zandarimaria ao Ambohimangakely, ny GPHC Rivosoa Mamy, nalaina am-pitaka tamin’ny mpiambina io fiara io satria nofitahin’ireo jiolahy izy fa hoe hitondra olona marary ilay fiara. Nanomboka teo, tsy hita intsony ny nanjavonan’ilay fiara ka niroso tamin’ny fikarohana hatrany ny zandary. Nisy, araka izany, ireo olona noahiahina tamin’ity raharaha ity ka nosamborina avy hatrany ary natolotra ny fitsarana. Vokany, olona iray tamin’ireo voasambotra no nidoboka avy hatrany eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy raha nahazo fahafahana vonjimaika (LP) kosa ny olona roa hafa. Namoaka « delegation judiciaire » indray ny fitsarana taorian’izay mba hisamborana ireo mpiray tsikombakomba tamin’ity raharaha halatra fiara ity.
Korontambin’ilay fiara sisa hita…
Ny zoma lasa teo, nahazo loharanom-baovao marim-pototra ny zandary fa hita eny amin’ny faritra Ambohidratrimo ilay fiara ka nidina haingana nizaha ifotony momba ny fisian’ity fiara ity izy ireo. Tratra tao an-tanànan’olona ilay fiara sprinter very ka olona maromaro indray voasambotra tamin’ity raharaha ity. Nambaran’ny GPHC Rivosoa Mamy hatrany fa lehilahy iray no anisan’ny atidoha nikotrika izao asa ratsy izao ka tratra tany Ankazobe ity jiolahy ity. Miisa fito, araka izany, ireo olona voasambotry ny zandary tamin’ity halatra sprinter ity ka teo ireo nandray anjara mivantana, nisy kosa ireo nikasa hividy ny “carrosserie”-n’ilay fiara, tao koa ireo olona nametrahana ny fiara ary ireo nanendaka tsikelikely ny vatan’ilay fiara ka korontambin’ny fiara sisa hita. Natolotra ny fitsarana, omaly ireo voarohirohy ireo ka nadoboka am-ponja, raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny vehivavy iray. Mangataka hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny fanomezam-baovao marim-pototra hatrany ny zandarimaria mba hamongorana ireo mpanao ratsy.